GodTools - Manampy anao mizara ny finoanao
Zarao ny finoanao
Ireto ny azonao atao amin'ny App
Ampidirina ao anatin'io app ity dia fitaovana isan-karazany mirakitra fampitam-baovao izay manampy anao hizara ny finoanao amin'ny toe-javatra rehetra. Mifidiana iray mifototra amin'ny safidinao sy ny olona miaraka amin'ny olona izay mizara. Afaka manampy na manala fitaovana ianao mba hahitanao ireo olona tianao indrindra ao amin'ny tranonao.
Fahafantarana an'Andriamanitra manokana:
Mangataha fanasana haparitaka amin'ny fomba hahafantarana an'Andriamanitra.
Mahafantatra an'Andriamanitra amin'ny fomba manokana:
Manome fitsipika efatra momba ny fomba hiditra amin'ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra.
Ireo Lalàna ara-panahy efatra:
Manaova fanazavana tsotra momba ny fanasan'Andriamanitra ho an'ireo izay mbola tsy mahafantatra Azy.
Mitadiava torolalana mahasoa momba ny fomba hahafantarana sy hiaina ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainanao kristianina.
Voninahitra naverina tamin'ny laoniny:
Mandray ny hafatry ny filazantsara amin'ny voninahitra iray - fahamenarana mahatsiravina.
Fantaro ny hafatra fototra ao amin'ny Baiboly manazava amin'ny alalan'ny sary efatra.
Nahoana Andriamanitra Godools?
Afaka manampy ny fotoana, ny toerana rehetra, ary amin'ny fiteny maro ny GodTools. Andriamanitra dia mamporisika anao hiresaka amim-pahatokiana amin'ny hafa momba ny fomba ahafahan'izy ireo manomboka sy mampitombo ny fifandraisany amin'Andriamanitra ... na dia tsy nizaranao ny finoanao mihitsy aza taloha.
60 + fiteny
Miaraka amin'ny bokotra fihodinana dia azonao atao ny mametraka mora foana ny fonao sy ny azy.
Misafidiana fitaovana iray ary fantaro izany. Mivavaha ho an'Andriamanitra mba hanokatra varavarana azo atao. Ampiasao ny iray amin'ireo fanontaniana momba ny tetezamita voatanisa ao ambadiky ny bokotra informatika amin'ny fitaovana tsirairay hanombohana resaka. Vakio am-pamakiana ny votoatiny ary diniho ny resaka nifanaovan'i Jesosy.
Ahoana no hanovako ny safidiko?
Ampiasao ny sarimihetsika maresaka amin'ny ankapobeny ao amin'ny trano fandefasana izany na mandehana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny zorony havia ambony.
Ahoana no ahafantarako hoe inona no fitaovana ampiasaina amin'ny teniko voalohany?
Amboary ny fiteny voalohany anao. Ny lohatenin'ireo fitaovana izay misy amin'ny fiteninao dia hiseho amin'ny fiteninao. Ny default dia Anglisy. Azonao atao ihany koa ny miditra lisitra misy amin'ny fiteny iray amin'ny alàlan'ny fanindriana ny sary famantarana ao amin'ny fitaovana tsirairay.
Ahoana no ahafantarako hoe inona no fitaovana ampiasaina amin'ny fiteny mifanandrify amiko?
Voalohany, tanteraho amin'ny fiteny vahiny ny teny mifanaraka aminao. Ny fampiasana ny fiteny parlemananao dia aseho amin'ny zon'ny lohan'ny fitaovana tsirairay. Raha tsy miseho ny fiteninao, dia tsy misy io fitaovana io amin'io fiteny io. Azonao atao ihany koa ny miditra lisitra misy amin'ny fiteny iray amin'ny alàlan'ny fanindriana ny sary famantarana ao amin'ny fitaovana tsirairay.
Nahita fahadisoana aho, inona no ataoko?
Ampahafantaro anay support@godtoolsapp.com
Ahoana no hangatahako ny fiteny ampiasaiko?
Alefaso aminay ny fangatahanao amin'ny support@godtoolsapp.com
Lazao ahy bebe kokoa momba ny famantarana ny mailaka ao amin'ny efijery vavaka.
Amin'ny fiteny sasany, dia omena safidy ianao hanao sonia ny fanaraha-maso aorian'ny fanapahan-kevitra momba an'i Kristy. Ity mari-pamantaran-tsoratra ity dia manoratra ho anao amin'ny alàlan'ny andiam-panandevozana 7 maimaim-poana vaovao ho an'ny New Growth izay atolotra ao amin'ny Mail Chimp na tolotra mitovy amin'izany. Tsy mitaky anao ny fanoloran-tena. Azonao atao ny manoratra tsy tapaka amin'ny fotoana rehetra.
Fantatrao ve ny rindrambaiko hafa manampy ahy hizara ny finoako?
Andramo ireto fampiharana hafa: Voke, Soularium, Perspective, EveryStudent, JesusFilm.
Misy tranonkala ve?
Knowgod.com dia vohikala iray miaraka amin'ny votoatin'ny tranonkala. Knowgod.com Azo alaina ao amin'ny tranonkalanao manokana.
Inona no tsy mitovy amin'ny fitaovana tsirairay?
Ampiasao ny sary famantarana eo amin'ny farany ambany amin'ny fitaovana tsirairay mba hampahafantarana ny famaritana fohy.
Ity app ity dia maka toerana be loatra amin'ny findaiko. Inona no azoko atao?
Raha efa nandefasana fiteny maro ianao, ny vahaolana tsara indrindra dia ny hamafa ilay rindrambaiko ary avereno averina indray.
Misy fampiofanana ho an'ireo fitaovana ireo ve?
Ireto misy rohy mahasoa:
Articles about sharing your faith
Ahoana no hizarana ny fahalalana an'Andriamanitra amin'ny fomba manokana
Nahoana aho no mila teny parlemantera?
Ny fiteny parallèle dia ahafahanao mifampiresaka eo amin'ny fiteny mandritra ny fampisehoana raha toa ka miteny fiteny hafa ilay olona ifampizaranao. Tokony hifantenana ny teny parallèle mba hampiasana io endri-javatra io.
"Velom-pankasitrahana izahay noho ny fananana ny finday amin'ny telefaona ary afaka manala azy amin'ny fiteny rehetra ilainay, isaky ny manokatra ny varavarana hizara amin'ny olona!"
"Misaotra fa mora ny mizara ny filazantsara amin'ny olona miteny fiteny hafa."
"Misaotra ny fampiharana amin'Andriamanitra Tools, mahatsapa aho fa afaka namakivaky ora maro momba ny mpianatra sy ny fitoriana filazantsara ho amin'ny minitra 20 ary hamela azy amin'ny fitaovana rehetra ilainy hitory an'i Kristy amim-pahasahiana eo amin'ny toeram-ponenany."
Natao ho anao, avy aminay.
anarana Ampidiro ny anaranao.
karazana verinia Azafady manan-kery mailaka.
Ny hafatrao Ampidiro ny hafatra.
Message tsy nahomby. Azafady andramo indray.
Misaotra noho ny hafatra! Ho isika mifandray ela.
Apetraho amin'ny tranokalanao izany
Amin'ny fehezan-dalàna fohy, afaka manana fanehoana mazava tsara ao amin'ny bilaoginao na tranokala ianao.
Alefaso fotsiny ny iray amin 'ny tsipika ambany eto ambany ary apetraho ao amin' ny tranonkalanao.
Fahafantarana an'Andriamanitra manokana
Ireo Lalàna ara-panahy efatra
Mizara amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny namana iray!
Copyright | User fifanarahana